Qabyo-qoraalka dastuurka Soomaaliya oo la dhamaystiray Muqdisho 24 Apr, 2012Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Prof Cabdiweli Maxamed Cali ayaa xaqiijiyey in Guddiga Madaxa bannaan ee Dastuurka iyo Guddiga Khubarada Soomaalida inay Qabyo-Qoraalkii Dastuurka ku soo gabogabeeyeen waqtigii loogu talo galay ee aheyd 20kii April 2012 kaasoo sida uu sheegay waafaqsan Axdiga KMG ah, waqtiyeynta Roadmap ka iyo Heshiisyadii Garoowe.
Xukuumadda FKMG ah ee Ra’iisul Wasaare Prof Cabdiweli Maxamed Cali waxey mudnaanta koowaad siiyeen Dastuurka oo lafdhabar u ahaa qoddobadii lagu heshiiyey Roadmap ka 6dii September 2011 oo si gaar ah u xusayey i n Qabo-Qoraalka Dastuurka lagu soo dhameytiro 20ka April 2012. Ra’iisul Wasaaraha ayaa yiri “ Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in xubintii ugu muhiimsaneyd ee qeybaha Roadmapka ee aheyd Dastuurka in lagu soo dhameystiray xilligii la isla gartay. Waxaan u mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed oo muddadii wadatashiga ku biirayey fikradahooda si hagar la’aan ah, Guddiga madaxa bannaan ee Dastuurka (IFCC) iyo Guddiga Khubarada Soomaaliyeed (CoE) oo danta guud ka horumariyey tooda gaarka ah, Wasiirada Wasaaradda Dastuurka, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta, shaqaalaha Xafiiskeyga, guddiyada farsamo iyo beesha caalamka oo xaqiijiyey guushan taariikhiga ah inay noqoto mid dhab ah.”
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay haddii Golaha Ansixinta Dastuurka ay u coddeeyaan Dastuurkaas uu noqonayo mid si KMG ah loogu dhaqmo. Kaasoo ahaan doona mid KMG ah inta dowladdu ay ka abaabuleyso doorasho shacabka oo dhan ay ka qeybgalaan oo lab iyo dhadigba ay helaan fursad ay ugu coddeeyaan dastuurka.“ Dastuurkan waxaa iska leh Shacabka Soomaaliyeed, sida rag, dumar, caruur iyo waayeelba. Haddii aan u isticmaalno si sax ah, una xafidno si sax ah, una horumarino si sax ah, waxuu noqon karaa mid awood leh oo si guud nooga xorreeya caddaadiska, xad-gudubyada xaquuqul insaanka iyo mid noo dhowra dhamman sharafta ummadda Soomaaliyeed. U isticmaalidda sida saxda ah, waxey kaloo noo horseedeysaa xornimo dhameystiran, horumar dhaqaale iyo barwaaqo.” Ayuu ku soo gabogabeeyey Ra’iisul Wasaarahu.
Xukuumadda KMG Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in ay soo dhammaystirtay qabya qoraalkii dastuurka,waqtigii loogu tala galay oo ahayd 20ka April 2012 kaasoo sida ay sheegtay dawladdu waafaqsan axdiga DKMG Soomaaliya,waqtiyaynta Road mapka iyo heshiisyadii Garoowe.haddaba qabya qoraalka dastuurkaan ayaa mudaddii ay hawshiisu socotay waxaa ka horyimid caqabado iyo mucaarado ay u soo jeedinayeen qaar ka mid ah qeybaha kala duwan ee bulshada,hay,adda culimada Soomaaliyeed ayaa bayaan ay soo saartay 9kii bishaan waxa ay bulshada Soomaaliyeed ugu baaqeen inaanay ansixin ila mar ahaantaana aanay meel marin qabya qoraalka dastuurkaan oo ay sheegen in dastuurkaani uu yahay mid dayacaya diinta,dalka iyo dadka Soomaaliyeed , sidoo kale waxaa bayaankaasi ka soo baxay hay'adda culimada lagu sheegay in dastuurkaani yahay mid laga soo minguuriyay dastuuro dalal shisheeye kaasoo ay sheegeen inaanu la jaanqaadi karin waaqiciga ka jira Soomaaliya, waxaana ay war saxaafadeedkooda uga digeen in shacabka Soomaaliyeed in ay ku degdegaan ansixinta dastuurkaas.
Dhinaca kale qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka iyo aqoon-yahannada Soomaaliyeed ayaa ku tilmaamay dastuurkan mid aan hadda xlligiisa la taagneyn. Xildhibaan Cawad Cashara ayaa ku dhaliilay dastuurka inaan afti looga qaadin qaar ka mid ah gobollada aan ku jirin gacanta dowladda KMG ah, sidaa darteedna loo baahan yahay in dadkooda la tixgeliyo.